Danbiga Uu Galay Aubameyang Ee Sababay In Lagu Ciqaabo Kursiga Keydka Kulankii Tottenham Oo La Ogaaday & Ganaax Uu Muteysan Doono | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDanbiga Uu Galay Aubameyang Ee Sababay In Lagu Ciqaabo Kursiga Keydka Kulankii Tottenham Oo La Ogaaday & Ganaax Uu Muteysan Doono
Danbiga Uu Galay Aubameyang Ee Sababay In Lagu Ciqaabo Kursiga Keydka Kulankii Tottenham Oo La Ogaaday & Ganaax Uu Muteysan Doono
March 15, 2021 Balaleti
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa la kulmay ganaax lacageed ka dib markii uu ka soo daahay tababarkii kooxda Arsenal ee ka hor kulankii North London Derby ee Tottenham.
Aubameyang ayaa durbadiiba waxaa ciqaabay tababare Mikel Arteta kaasoo qaatay go’aan geesinimo leh isagoo kursiga keydka dhigay kabtankiisa xilli Arsenal ay kulan weyn la ciyaareysay deriskooda Tottenham.
Weeraryahanka Gabon ayaa ahaa bedel aan la istcimaalin kulankii Emirates isagoo daawaday xiddigii kabtanimada ka bedelay Alexander Lacazette oo goolka guusha oo rigoore ahaa dhalinaya iyadoo Gunners ay 2-1 kaga badisay Spurs.
Aubameyang ayaa ciqaabtiisa kursiga keydka waxaa u raaci doonta ganaax lacageed madaama uu jabiyay sharciyada u yaala kooxda mana ahan markii ugu horeysay ee uu soo daaho.
Go’aanka Arteta ayaa ahaa mid weyn madaama Aubameyang uu ka mid yahay xiddigaha ugu waa weyn kooxda oo qaab ciyaareed fiican ku jira isagoo dhaliyay sagaal gool 12kii kulan ee ugu danbeysay.
Laakiin tababaraha Arsenal ayaa ku adkeystay go’aankiisa isagoo ku ciqaabay Aubameyang inuu jabiyay sharciyada anshaxa ee u yaala qolka labiska.
Arteta ayaa yiri ciyaarta ka dib: “Waxaan qaatay go’aan aan aaminsanahay inuu yahay midka saxda ah.
“Anshax ilaalinta waa aas-aaska iyo dhismaha kooxda ee mudada dheer. Waa sababta aan uga hadlo mar walba islamarkaana aan ugu dhaqmo.”
Si kastaba, tababaraha Arsenal ayaa soo jeediyay inaysna jirin xurguf shaqsi ah oo kala dhaxeysa kabtankiisa.
Wuxuu hadalkiisa raaciyay: “Waxaan leenahay qaab aan iskula nool nahay waana inaan is ixtiraamno. Laakiin Aubameyang waa nin cajiib ah, waa mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda, waa kabtankeena. Waxyaabahaan waa ay dhacaan, hore ayaan uga soconeynaa. Aan ku riyaaqno guusha.”